Madaxweyne Erdogan oo shaaca ka qaaday wax ay ka naxaan saraakiishii ka dambeysay afgambiga – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
Madaxweyne Erdogan oo shaaca ka qaaday wax ay ka naxaan saraakiishii ka dambeysay afgambiga
Madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa waqtiga ay sii xirnaanayaan usii kordhiyay dadka loo haysto inay ku lug lahaayeen afgambigii dhicisoobay ee dhawaantaan ka dhacay dalka Turkiga.
Madaxweyne Erdogan ayaa sheegay in muddo 30 cisho ah ay sii xirnaan doonaan dadkaasi oo aanan la geyn doonin cadaalada, si loo dhameystiro baaritaanada socda.
War-saxaafadeed kasoo baxay xafiiska madaxweynaha Turkiga Recep Tayyib Erdogan ayaa sidoo kale lagu amray in la xiro in ka badan 1,000 xarumo iskuul ah oo gaar loo leeyahay iyo in ka badan 1,200 xarumo hay’adood.
Dhinaca kale, waxaa weli socda baaritaanka rasmiga ah ee la xiriira afgambigii dhicisoobay ee dhawaan ka dhacay dalka Turkiga, waxaana ay dowladda Turkiga qaadeysa talaabooyin adag oo la xiriira dhacdadaasi.
Ugu dambeyntii, dalka Turkiga ayaa weli ku jira xaalad deg deg ah oo uu madaxweynaha dalkaasi Recep Tayyib Erdogan uu kusoo rogay, iyadoo baarlamaanka dalkaasina ay arrintaasi ansixiyeen.
Si kastaba ha ahaatee, dowladda Turkiga ayaa horay xabsiga u dhigtay ciidamo gaaraya 10,000 oo askari, kuwaasi oo isugu jira saraakiil iyo askar ciidan, waxaana kuligood lagu soo eedeeyay inay ka dambeeyeen qorshaha afgambiga dhicisoobay.